IATA: Manatsara ny fahazoana miditra sy miditra amin'ny fitsangantsanganana an'habakabaka
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » IATA: Manatsara ny fahazoana miditra sy miditra amin'ny fitsangantsanganana an'habakabaka
Ny herinandro lasa, ny Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) namarana ny Simposium Global Accessibility Symposium voalohany, hetsika voalohany amin'ny karazany toy izany fikatsahana fanatsarana ny traikefa amin'ny dia an'habakabaka ho an'ireo mpandeha sembana.
Nampiantrano an'i Emirates tao an-tanànany Dubai, ny Symposium dia niarahaba ny vahiny avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, mpandrindra ary vondrona mpiaro ny fidirana amin'ny fidirana. Ny hetsika dia mifanaraka amin'ny vahaolana indostrialy nifanarahan'ny seranam-piaramanidina mpikambana IATA tamin'ny volana jona 2019, izay manolo-tena hanatsara ny traikefa mpandeha ho an'ireo mpandeha manana fahasembanana, sady hita no tsy hita.
“Nasehon'ity hetsika ity fa tena ilaina ny fiaraha-miasa sy ny hevitra. Amin'ny alàlan'ity fanangonana ity sy hetsika hafa, ny orinasam-pitaterana dia mitady hametraka fifanakalozan-kevitra tsara kokoa eo amin'ny indostria, ireo vondrona mpiaro sy ireo mpandeha. Na dia manana fenitra ho an'ny olona mandeha sembana mandritra ny fotoana fohy aza ny indostria dia tsapanay fa mbola misy banga ary mila manao bebe kokoa isika. Faly izahay fa eto amin'ity dia ity mba hahatonga ny fitsangantsanganana an'habakabaka ho azo idirana sy hidiran'ny rehetra, ”hoy i Linda Ristagno, mpitantana ny raharaham-bahiny eo amin'ny IATA.
Ho fanampin'ireo mpandahateny avy amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ao anatin'izany ny British Airways, Delta Air Lines, Emirates ary WestJet, ireo mpanentana dia avy amin'ny fiaviana maro samihafa toy ny rafi-pitantanana toa ny UK CAA, maso ivoho misahana ny fitaterana kanadiana ary ny minisiteran'ny fotodrafitrasa breziliana; ireo vondrona mpiaro ny asa toy ny Pineda Foundation / World Eniled, ny tambajotra eoropeanina momba ny fizahan-tany azo tsidihina, ny fikambanana Open Doors ary ny Queen Elizabeth's Foundation for Disected People; ary koa mpiara-miombon'antoka maromaro ao anatin'izany ny dnata sy ny seranam-piaramanidina Heathrow. Nisy ihany koa ny fampisehoana natolotry ny solontena avy amin'ny Apple sy Microsoft izay mampiseho ny maha-zava-dehibe ny famolavolana sy ny fanavaozana ny teknolojia.
Ny hetsika dia nanasongadina fehezan-teny fototra sy fifanakalozan-kevitra momba ny fahazoana miditra sy lohahevitra fampidirana. Ny sasany amin'ireo olana lehibe napetraka nandritra ny Symposium dia nahitana:
• Ny tsy fitoviana amin'ny politika manerantany dia ilaina amin'ny asa amin'ny fidirana sy fidirana amin'ny seranam-piaramanidina anisan'izany ny zotram-piaramanidina / tany ary ny fitsipiky ny governemanta
• Fahatakarana tsara kokoa ilaina amin'ny zavatra takian'ny mpandeha manana fahasembanana miafina
• Fomba fanatsarana sy fanara-penitra ilaina amin'ny fampandehanana ny fikirakirana ny fanampiana ny fivezivezena satria avo loatra ny tahan'ny fahavoazana
• Ny maha-zava-dehibe ny fiofanana dia nekena, indrindra ho an'ireo andraikitra hiatrehana ny mpandeha, hiantohana ny serivisy maha-olona, ​​miombom-pihetseham-po sy mifantoka amin'ny olombelona ho an'ireo mpandeha manana fahasembanana.
• Tokony hasiana vahaolana ny tsy fitoviana eo amin'ny politikam-piarovana manerana ny seranam-piaramanidina sy ny fanjakana ho an'ireo mpandeha sembana
Ny valim-pikarohana sy ny valin'ity hetsika ity dia hampiasaina hananganana ny paikady fidirana IATA efa misy izay hitarika fandefasana mazava, sady hanohy ny fifampiresahana amin'ireo mpandeha, seranam-piaramanidina ary governemanta.
“Dingana iray mankany amin'ny lalana marina izy io, saingy tsy vita ny asa. Hanohy hanamora ny fifanakalozan-kevitra sy hanatsara ny paikadin'ny indostria eto isika. Na izany aza, mila governemanta isika amin'ny alàlan'ny famolavolana fitsipika mirindra, amin'ny fakan-kevitra amin'ny indostria sy ireo vondrona azo idirana, izay manome mazava sy tsy fitovizan'izao tontolo izao. Ny fiaraha-miasa dia hanampy amin'ny fiantohana traikefa azo antoka sy azo antoka ary mendrika ananantsika amin'ireo mpandeha ireo, "hoy Ristagno.